Ajụjụ - Ohere Franchise Maka Azụ |
Ihe omume Franchise
Tinye Akụkọ & Ihe Omume
Họrọ obodoArgentinaAustraliaAustriaBahamasBahrainBrazilBruneiBulgariaCambodiaCanadaChileChinaCroatiaCyprusDenmarkEgyptFinlandFranceGermanyGreeceHong KongHungaryIndiaIndonesiaIrelandItalyJapanKuwaitLebanonMalaysiaMaltaMauritiusMexicoMyanmarNetherlandsNew ZealandNorwayOmanPakistanPhilippinesPolandPortugalQatarRomaniaRussiaSaudi ArabiaSingaporeSlovakiaSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenSwitzerlandThailandtoro toroUAEUnited KingdomUSAVietnamZambia
Ohere nweta aha Franchise
Chọgharịa site na otu narị aha franchise maka ire ere na akwụkwọ ndekọ aha UK & zuru ụwa ọnụ ahịa aha
Kedụ ohere ndị ana-akpọ aha?
Ohere nnabata Franchise bụ usoro iji kesaa ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ site na inye ikikere azụmaahịa, ngwaahịa, ọrụ & ihe ọgụgụ isi nye ndị na - etinye ego ga - arụ ọrụ n'ime ụdị azụmaahịa ụlọ ọrụ guzobere. Dịkarịa ala, mmadụ abụọ na-etinye aka na usoro franchise: (1) franchisor, onye na-enye akara ahia ya ma ọ bụ aha ahia ya & sistemụ azụmahịa ya & (2) franchisee, onye na-akwụ ndị eze na-aga n'ihu & na-abụkarị ego mbụ maka ikike iji zụọ ahịa n'okpuru aha na usoro franchisor.
Franzọ azụmaahịa azụmahịa bụ ụdị kachasị amasị ndị mmadụ. N'ime mmekọrịta azụmahịa aha franchisor, franchisor na-enye ndị franchisee ọ bụghị naanị aha ahia, ngwaahịa na ọrụ kama usoro dum maka ịre azụmaahịa. Franchisee na-anata nhọrọ saịtị na nkwado mmepe, akwụkwọ ntuziaka, ọzụzụ, ụkpụrụ ika, njikwa mma, atụmatụ ịzụ ahịa na nkwado ndụmọdụ sitere na franchisor. Ọ bụ ezie na amachaghị banyere ịsụgharị asụsụ, ịsụ asụsụ ọdịnala ma ọ bụ ngwaahịa bụ n'ezie nnukwu ọnụọgụ ahịa karịa ka a na-esi azụmaahịa azụmaahịa. Na ọdịnala ọdịnala, ihe a na-elekwasị anya abụghị na sistemụ nrụọrụ kama ọ bụ ngwaahịa ndị franchisor na-emepụta ma ọ bụ na-eweta ya na franchisee. Na ọtụtụ, mana ọ bụghị ihe niile, ọnọdụ, ngwaahịa ndị emepụtara na-adịkarị mkpa maka ọrụ tupu ebighachi ya dị ka achọpụtara na ụlọ ọrụ ụgbọala.
Ohere ndi Franchise kpuchitere otutu ulo oru, obughi nri dika otutu kwere. Ihe atụ ndị ọzọ bụ franchises na-elekọta ahịhịa na ahịhịa, ụlọ ọrụ njikwa azụmaahịa, nlekọta ụmụaka, franchises ụgbọ ala gụnyere ụgbọ ala nlekọta, mmezi na ahịa nke ugbo ala na ọtụtụ olu ndị ọzọ na-acha ọcha, mkpọsa ahịa & van sọks. N’ezie azụmahịa ọ bụla nke a ga-ebugharị ka emee ka aha na azụmaahịa aha anyị, anyị Franchise UK Directory bụ otu n’ime akwụkwọ ikike aha franchise 60 anyị zuru ụwa ọnụ ị nwere ike ịchọpụta ịchọta azụmahịa zuru oke aha gị.
Kedu ihe kpatara ịzụta ohere njikwa?
Otu ntanetị azụmaahịa na - emepụtagharị azụmaahịa na - aga nke ọma ma ọ bụrụ na i detuo ya nke ọma na ọnọdụ ahịa mpaghara gị bụ otu ihe ahụ mgbe ahụ ị ga - enwe nnukwu ohere ịga nke ọma na azụmaahịa ọhụrụ gị. Ọtụtụ ndị ọkachamara na-eduga na mkpakọrịta aha na-ekwu na ọnụego ihe ịga nke ọma na ntanetị nke Franchise karịrị 95%, karịrị nke ukwuu karịa mgbe ịmebere azụmahịa n'onwe gị. Ihe ọzọ dị mma n'anya ọtụtụ ndị na-azụta ahịa nwere ike ịgbanwe ụzọ ọrụ. Mgbe ịzụrụ franchise ị na-azụta ihe atụ ọfụma ma zụọ ma kwado ya site n'aka ndị ọkachamara egosipụtara na ngalaba ha, yabụ nwere ike ịbụ nnukwu ụzọ maka ọrụ ọhụụ ma ọ bụ ịgbanye ọrụ gị ka ị na-azụ ahịa. Ndị na-ahụ maka aha Franchise nwere ike inyere ndị ahịa aka ịzụrụ ahịa site na ịnye ndụmọdụ & ntuziaka gbasara usoro ịsụgharị asụsụ niile.
Chọpụta ihe banyere franchises maka ọrịre
Na webụsaịtị a anyị nwere ọtụtụ isiokwu nnabata, akụkọ na akụrụngwa ị nweere onwe ya ozi yana ozi gbasara ọnụnụ franchise nso anyị Anyị nwere akwụkwọ iwu 60 nke aha maka ire ka ịlele franchises maka ọrịre na mpaghara gị ka pịa pịa ndekọ maka gị obodo ma chọgharịa banyere ozi mkpọsa na franchises mpaghara maka ọrịre. Jisie ike na nchọta gị maka ezigbo ohere ịzọ ọchịchị.
Chọọ maka nnabata ọchịchị obodo Briten na mba ndị ọzọ, ozi banyere mba, ndụmọdụ azụmaahịa na ọnụ ọnụ ahịa aha franchise na ndekọ aha franchiseek.
Ohere nke Franchise site na obodo na ụdị
Nweta ozi akụkọ mpaghara na oghere ọhụrụ
Gụ akụkọ na azụmaahịa na ntanetị nkwado sitere n'aka ndị ọkachamara mpaghara
Kpọtụrụ ndị mmekọ anyị ma ọ bụ ndị ọnụ ahịa franchise maka nkwado na ịsụgharị mpaghara
Bido njem njem gị taa!
aha Otu Ọchọ
Họrọ udi otuOmogbọ ala FranchisesChzọ Nkwado azụmahịa FranchisesLekọta FranchisesFranlọ nri FranchisesFranmụaka FranchisesNhicha FranchisesShoplọ ahịa kọfị FranchisesOnye ozi FranchisesMkpakọrịta nwoke na nwaanyịMmụta FranchisesFranchises egoFranchise ResalesUgbo FranchiseAhụike na Mma Mma FranchisesAhụike na Ahụike FranchisesFranchises si n'ụlọHome MmeliteNkwari akụ HotelFranchise Ntanetị NtanetịFranchises dị ọnụ alaNchịkwa FranchisesChzụ ahịa FranchisesPetch Franchise metụtaraChsụgharị FranchisesNgwongwo NgwongwoRetail FranchisesFranchises ỌrụFranchise egwuregwuNjem na Ntụrụndụ FranchisesVan based Franchises
Chọọ Yiri Franchises
Insteadlọ Kama Nlekọta Ndị Isi - UK's No.1 franchise Home Kama nlekọta nlekọta bụ ụlọ ọrụ UK nke 1.
Rịọ Ozi EGO
Nchịkọta ụlọ ọrụ ehibere na 2002, Monkey Puzzle Day Nurseries bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi kachasị na UK na onye na-elekọta ụmụaka atọ. Tọrọ ntọala…
DNS Akaụntụ Franchise Mee ọdịnihu gị na DNS Accountants Franchise na azụmahịa nke gị site na ohere anyị gosipụtara. Na…
Inyere ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ụlọ ahịa aka ikwu maka mmebi mkpuchi ihe gbasara ihe ịga nke ọma anyị bụ ụlọ ọrụ na-emeri emeri nke na-enyere ndị na-eche ihe aka imebi ihe ịga nke ọma…
Ọkachasa nhicha biya ebe ọ bụ na 2006 triedzọ anyị nwalere na-anwale, yana obere mkpanaka anyị, mmiri agwakọta mmiri,…
Kedu ndị bụ Haulage Franchise E guzobere Haulage Franchise na ebumnuche nke ịgbanwe ụlọ ọrụ njem. Na…
Oke ohere na ntụrụndụ na ụlọ ọrụ ntụrụndụ ahia dị ka inflatable Photobooth & Hamsterzorb Ego azụmahịa dị elu na…
Etinye ego na a kọfị azụmahịa ebe ị na-enweta kwa ọnwa na-ekwe nkwa alaghachi, a kediegwu òkè nke kwa afọ Efrata, gbakwunyere anyị…
Ndi otu ndi otu ohuru 5 ekwuputara na QFA na-aga n’ihu n’iru
Pink Spaghetti Na-ebido Mmemme Ọzụzụ Franchise Ọhụrụ
Gịnị bụ Master Franchising?
Ndụmọdụ 6 dị elu maka iji nweta aha zuru ụwa ọnụ
Abụọ abụọ Petpals franchisees ruru na njedebe nke mba Pet Industry Federation (PIF) onyinye
5 isi ikike niile nna ukwu franchisees kwesịrị inwe
Iwu IR35 na Mmetụta ya na Franchises
Taylor mere Franchising nwetara Thomas nhicha
0 nwere XNUMX na-eche
Mezue Ajuju gi
0 Franchise ahọrọ
Investment Franchise Achọrọ
Etinye ego achọrọ£ 10,000£ 20,000£ 30,000£ 40,000£ 50,000£ 60,000£ 70,000£ 80,000£ 90,000£ 100,000£ 125,000£ 150,000£ 175,000£ 200,000£ 300,000£ 400,000£ 500,000
Ee, agụọla m ma nabata ụkpụrụ nzuzo Franchiseek achọpụtara site na ịpị Ebe a
Ee, gbakwunye m na Ndekọ Njikọ Franchiseek
Franchiseek bụ akwụkwọ ndekọ aha zuru ụwa ọnụ nke ohere mgbasa ozi gụnyere ohere ndị ọchchchchchchchchchchchch a a na mba ha na ire. Amalitere na 1999 akwụkwọ ndekọ aha anyị zuru oke nke mba ofesi na-ere na-enye ozi banyere ọtụtụ ụdị franchises dị adị.
Franchiseek na-enyere aka kwalite ụwa mgbasa ozi na ịhe na -eme ihe aha na njigharị nke franchise na ihe ngosi enwere ike ịdebe ndị na-ege anyị ntị oge ọhụụ site na njiri mara ọhụụ, ihe ngosi njị na ngosi ngosi na ihe omume.
Chọta gị ezigbo franchise ma ọ bụ franchise mba ụwa taa na Franchiseek
Ohere International Franchise
Ozo Nzi Master
Mgbakwunye mgbasa ozi
2 Bromley okporo, Seaford, BN25 3ES, UK
Mgbasa Ozi Franchise
Pịa ebe aAdvertkpọsa site na £ 2.60 kwa ụbọchị!
Copyright Copyright 2020, Franchiseek International